कोरोनाको वास्तविक चुनौती अब !- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कोमल वली भन्छिन्, 'युट्युबबाट गीतै हटाउनु त किन पर्थ्यो र ?'
श्रावण ८, २०७७ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — हरेक तीजमा गीत ल्याउन नछुटाउने गायिका कोमल वलीलाई यसपटक भने सुन्न पाइने छैन । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारी र कोरोनाको कहरले गर्दा यो वर्ष तीज गीत ल्याउन नपाएको बताउँछिन् उनी ।
तीज नजिकिँदै छ । तीजलाई लक्षित गरेर धमाधम गीतहरु सार्वजनिक हुन थालेका छन् । तर, गायिका वली यसपालि दर्शकलाई आफ्नो पूरानो गीतमै नाच्न सुझाउँछिन् । 'जम्मा भएर नाच्ने, गाउने गर्नु त भएन । किनभने कोरोना संक्रमण अझै पनि छ,' उनले भनिन्, 'एक दुइजना यस्सो भेटेर नाचेर गाएर सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखे भयो । त्यसैले मेरो सम्पूर्ण सुभचिन्तक, दिदीबहिनीलाई तीजको शुभकामना दिँदै भन्छु कि तपाईंहरूले मेरो पूरानो गीतमै रमाइलो गर्नुस् ।'
कोरोना कहरबीच सार्वजनिक भएका केही तीज गीत उनले सुनेकी छिन् । पछिल्लो समय गायिका सोफिया थापाको 'अबको तीज नो व्रत प्लिज' बोलको गीतमा उनले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर टिकाटिप्पणी भए । धार्मिक संगठनका व्यक्तिहरुले सोफियाको गीतले धार्मिक आस्थामा आँच पुर्‍यायो भनेर विवादमा तानिरहँदा उनले सोफियाको गीतलाई तीज गीतको रुपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन् । एक धार्मिक संगठनले चिठी पठाएको भन्दै बुधबार सोफियाको तीज गीतलाई हाइलाइट्स नेपालले प्राइभेट बनाएको छ । युट्युबबाट नहटाइए पनि अहिले यो गीत हेर्न मिल्दैन ।
लोकतन्त्रमा जस्तो पनि गीत गाउन पाउने धारणा राख्दै वली सोफियाको गीत तीजसँग सान्दर्भिक नरहेको कोमल बताउँछिन् । 'मैले त्यसमा कुरा उठाएको चाहिँ तीजसँग त्यति सान्दर्भिक छैन भन्ने कुरा हो,' उनले सुनाइन्, 'संगीतको हिसाबले पनि अलिकति सान्दर्भिक भएन । शब्दको हिसाबले पनि त्यति सान्दर्भिक छैन । पहिरनको हिसाबले पनि तीजजस्तो सान्दर्भिक छैन।' सोफियाको गीतको संगीत आफूलाई मनपरेको बताउँदै उनले थपिन्, 'गीत राम्रो छ सोफियाको । उहाँ आफैले संगीत पनि गर्नु भएको रहेछ । संगीतको पनि राम्रो क्षमता देखिएको छ त्यसमा ।'
तर, तीजको गीतमा भने आध्यात्मक पक्ष पनि हेर्नुपर्ने उनी तर्क गर्छिन् । 'अरुलाई व्रत बस्न पाइँदैन भन्दाखेरि कसैको आध्यात्मिक पक्षलाई, कसैको स्वतन्त्रतामाथि आँच पुर्‍याउने खालको हो कि त भनेर पनि हेर्नुपर्छ,' उनले भनिन् । उनी सोफियाको तीज गीत युट्युबबाट यसरी हटाउन नहुने बताउँछिन् । 'गीत त किन हटाउनु पर्थ्यो र ? तीजसँग व्याख्या नगरेको भने भइहाल्यो । गीत हटाउनु पर्थ्योजस्तो मलाई लाग्दैन । गीत ब्याण्ड गर्नुपर्छजस्तो लाग्दैन मलाई त्यसमा,' उनले भनिन् ।
गीत हटाउन दबाब दिने संगठनका व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सोफियाको गीत हटाउनुपर्ने चेतावनी दिँदै गरेको भिडियोमा वलीको 'पोइला जान पाम'बोल गीतले पनि सँस्कृतिमाथि प्रहार गरेको कुरा राखेका थिए । उनले भनेका थिए, 'कहिले हाम्रा कलाकार पोइला जान पाम भन्दै प्रहार गरेको छ । पोइलै जाने भए गए भइगो त । शिवजीको नाममा पोइला जान पाम भनेर उफ्रिन पर्थ्यो र ?'
यही प्रसंग निकाल्दा वलीले मुस्कुराउँदै जवाफमा भनिन्, 'ज-जसले मेरो गीत जोड्नु भो उहाँहरुले गीत बुझ्नु भएको छैन । आफूले मन परेको जीवनसाथी छान्नलाई पनि छोरी मान्छेलाई कति समस्या छ । छान्न सक्दिन, जान सक्दिन, त्यस्तो छोरी मान्छेको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रगतिशील गीत हो त्यो मेरो । पोइला जाने भनेको नेपाली शब्दकोषले जस्तो व्याख्या गरे पनि आफूलाई मन परेको जीवनसाथी छानेर विवाह गर्नु भन्ने अर्थ नै हो त्यो गीतको ।'
उनले उक्त गीत एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित रहेको बताइन् । 'एउटा व्यक्तिमा केन्द्रित थियो त्यो गीत । त्यो एक युवती जो आफूखुशी विवाह गर्न चाहन्छे । र शिवजीसँग प्रार्थन गर्दैछे,' उनले भनिन्, 'त्यो युवतीले योग्य वरको लागि नै शिवजीसँग प्रार्थना गर्छे । अब धेरै माइतीघरमा बस्ने मन छैन अहिलेकै सालमा पोइला जान पाम भनेर उसले आफ्नो प्रार्थना राख्छे । भगवानको अगाडि जे कुरा पनि राख्न पाइयो नि । त्यो व्यक्तिमा मात्रै निहित छ गीत । कसैको छोरी पाइला जाओस् भन्दैन ।'
छोरीको स्वतन्त्रता र न्यायको लागि बनाएको उक्त गीत अझै आफ्नो लागि गर्वको विषय रहेको उनी बताउँछिन् । पछिल्लो समय तीज गीतमा विकृति बढेको भन्दै उनी त्यस्ता गीतलाई नियमन गर्दै जानुपर्ने धारणा राख्छिन् ।
तीजको व्रतको विषयलाई लिएर सामाजिक संजालमा बहस चलिरहेका बेला कोमल आफू यस वर्ष व्रत बस्ने बताउँछिन् । 'थाहा नपाउँदैदेखि बस्न थालेको । त्यो बेला पनि कुनै वर पाउँ भन्नको लागि बसेको थिइनँ । बस्न थालिसकेपछि त्यस्तै आस्था नै भयो कि म व्रत बस्छु भन्ने । मलाई व्रत बसेर स्वास्थ्यको हिसाबले पनि फाइदा भएजस्तो लाग्छ । ओह्हो ! मलाई भगवान शिवजी नै पाएको जस्तो लाग्छ ।' उनी सबै सुख शान्तिका लागि आफू व्रत बस्ने गरेको बताउँछिन् ।